Intsha ye-Cope ingenelela eyobuholi | IOL Isolezwe
Intsha ye-Cope ingenelela eyobuholi
Isolezwe / 4 February 2013, 10:19am / CELANI SIKHAKHANE
IZIKHATHI ezazimnandi lezi kubaholi be-Cope okunguMnuz Mosiuoa Lekota (kwesokudla) noMnuz Mbazima Shilowa kanti intsha yaleli qembu e-KZN isemizameni yokubahlanganisa ukuze babuyisane bavume nokuhoxa ebuholini kukhethwe abanye abantu.
UPHIKO lwentsha ye-Cope KwaZulu-Natal lwenze isiphakamiso sokuthi kube nokubuyisana phakathi kukaMnuz Mbhazima Shilowa noMnuz Mosiuoa Lekota ngenhloso yokudala uzinzo eqenjini.
Lolu phiko lukwenze lokhu ngemuva komdonsiswano oqhubekayo phakathi kukaLekota noShilowa bengena bephuma ezinkantolo kubangwa isikhundla sokuphatha i-Cope.
UMnuz Mxolisi Khalankomo ohola i-Cope esifundazweni uthe bazamile ukuxhumana noShilowa wakhombisa ukungabinankinga kodwa umuntu okusenzima kuye uLekota.
“Sibe nomhlangano nohlangothi lukaShilowa nommeli wakhe wathi akayiboni inkinga yokuba bagcine belihoxisa icala ngoba uzimisele ukuthi kubuyiswane. Inkinga esinayo wuhlangothi lukaLekota ngoba aluyizwa kahle eyalesi siphakamiso esiqhamuka naso. Thina njengabantu abasha sifuna laba baholi babuyisane, kuxoxwe iphele lento yabo kubanjwe ingqungquthela yokukhetha ubuholi,’’ kusho uKhalankomo.
Nokho uShilowa ukuphikile ukuthi uke waxoxisana nophiko lwentsha futhi uthe nommeli wakhe akaze amtshele lutho.
Uthe: “Njengoba sengake ngasho phambilini, anginankinga yokuhlala phansi noLekota sibonisane kodwa okwamanje akukho icala engizolihoxisa ngoba mina ngiyazivikela, akumina owaya enkantolo kuqala.”
UKhalankomo uthe okubaphethe kabi ukuthi konke okwakuyizinhloso zokusungulwa kwe-Cope sekugcine kushabalele ngenxa yomdonsiswano ophakathi kwalaba baholi.
Kumanje kubhekwe ukuthi icala labo libuyele enkantolo kungekudala lapho uShilowa ephikisana nokuxoshwa kwakhe.
Le ngxabano esuke ngemuva kwesikhathi esingaphansi kweminyaka emibili i-Cope isunguliwe, yadalwa umbango wokuthi ubani umengameli phakathi kukaLekota noShilowa njengoba bobabili bebanga ukwengamela. Ingqungquthela yokukhetha ubuholi yagcina ingahambanga kahle ngenxa yokulwa kwamalungu ayo.
UShilowa waphikisana nokuthi bathathwe njengabaholi abaqokwe ngentando yeningi abaqokwa kule ngqungquthela ethi bayithatha njengento engekho ngoba kukhona abantu abagcina bevinjiwe ukuba ingxenye yayo. Leli qembu lisungulwe ngemuva kwengqungquthela ye-ANC eyayisePolokwane ngo-2007, laba nedumela ngesikhathi lijoyinwa abaholi ababenohlonze ku-ANC njengoMnuz Saki Macozoma, uNkk Phumzile Mlambo-Ngcuka nabanye. UKhalankomo uthe basaqhubeka nemihlangano yokuzama ukuthi laba baholi bavume ukuhlala baxoxe bayeke ukubanga izikhundla ukuze iqembu libuyise isithunzi kukhethwe nobuholi obusha.